माओ, ऐँठन र नेकपा एकता - Dainik Nepal
माओ, ऐँठन र नेकपा एकता
निर्मल भट्टराई २०७६ असार १ गते १५:३७
(हुनान प्रान्तको माओको पुख्र्यौली घर । माओ सोचमग्न अवस्थामा देखिन्छन् । घरै अगाडिको माछा पोखरीभन्दा केही पर उनलाई भेट्न आउनेहरुको ठूलो भीडलाई लालसेनाले रोकिराखेकोले म सरासर उनीसम्म पुग्न सकेको थिइनँ । भीडमा फरक नश्लको मानिस देखेर होला मलाई छोडिदिन उनले लालसेनालाई आदेश दिए । भेट्नासाथ मैले मुठ्ठी उठाएर लालसलाम गरेँ । र, गर्विलो हस्तमिलन पनि । नेपालको बारेमा अन्तरवार्ता शुरु भयो ।)
प्रश्न : नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकासक्रसँग कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
माओ : कमी कमजोरी त नभएका होइनन् तर, असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण त खास छैन । म सम्झन्छु–नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुँदा त्यसमा अक्टोवर क्रान्तिको प्रभाव बढी थियो । नेकपाको पहिलो घोषणा पत्रले सोभियत क्रान्तिको पक्षमा आफूलाई उभ्याउदै बलियो कम्युनिष्ट पार्टीमार्फत् जनताको (लोक) जनवादी राज्य सत्ता कायम गर्ने लक्ष राखेको थियो । म सम्झन्छु–केही समय पनि नबित्तै विभाजित भएको नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीले मेरो नेतृत्वमा चीनमा भएको नौलो जनवादी क्रान्तिको पे्ररणाबाट सत्तरीको दशकमा फेरि बौरियो ।
मेरो फोटो अंकित राता किताब बोकेर नेपाली कम्युनिष्टहरुले देशभरि संगठन निर्माण गर्न थाले । कसैले मेरो वा नोलौ जनवादी क्रान्तिको आलोचना गर्यो भने ऊ दक्षिणपन्थी संशोधनवादी कहलिन्थ्यो । झापाली विद्रोही समूहले त कति समयसम्म मलाई अध्यक्ष माओ भनेर सम्बोधन गरिरह्यो । त्यो समूह नेकपा (माले) हुँदै नेकपा–एमाले) ले करीब दुई दशकपछि मलाई सही थान्कामा राख्यो । त्यसपछि एमालेजनहरु माओ, नौलो जनवादभन्दा बढी आफ्नो देश र क्रान्तिबारे बढी चिन्तन मनन् गर्न थाले ।
कमरेड मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम अगाडि सारेपछि यो क्रार्यक्रम नेपालमा निकै लोकप्रिय बन्यो । यो कार्यक्रम लोकप्रिय हुनुमा यसको सार र रुपको राम्रो संयोजन हुन सक्नु पनि प्रमुख कारण थियो । यो कार्यक्रमका नविन विशेषता त थिए नै, यसको रुपको संयोजन पनि उत्कृष्ट थियो । “जनता” शब्दले वर्गीयता समेटेको थियो भने “बहुदलीय” शब्दले नेपाली समाजको बहुलवादी चरित्रलाई मात्र ईङ्गित गरेको थिएन, नेपाली कम्युनिष्टहरु एकदलीय तानाशाही तरिकाले शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने छैनन् भन्ने ईमान्दार घोणणा थियो । “जनवाद” शब्दले समाजको समग्र लोकतान्त्रिकरणको मर्मलाई बोकेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । त्यसकारण यो नेपालको मात्र होईन, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमै नौलो अभ्यास थियो ।
म सम्झन्छु–तेश्रो सहश्राब्दीको शुरु हुनै लाग्दा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको अर्को धारले कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा माक्र्सवाद–लेलीनवाद–माओवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाएर मेरो नेतृत्वमा चीनमा सञ्चालन भएझैँ दीर्घकालीन जनयुद्धमार्फत् सत्ता कब्जा गर्ने र नेपालमा नौलो जनवाद लागू गर्ने बाटो तय गर्यो ।
नेपालमा दश वर्षसम्म सञ्चालित सशस्त्र विद्रोहले नेपालको सामन्तवादको जरामात्र हल्लाएन, सन २००६ मा एतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतामा यसको प्रमुख भूमिका रह्यो । तर, जब कम्युनिष्टहरुले सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर आयो, जबजकै विशेषताको अवलम्बन गर्नुपर्यो । सायद यही कारण हो, कुनैबेला सैद्धान्तिक रुपले विल्कुल भिन्न र कतिपय अवस्थामा शत्रुवत् सम्बन्धमा रहेका तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टीबीच एकता सम्भव भएको हो ।
प्रश्न : चिनिया पूँजीवादी–जनवादी (नयाँ जनवादी) क्रान्ति र नेपाली पूँजीवादी–जनवादी क्रान्तिबीच कुनै समानता देख्नुहुन्छ ?
माओ : (मुसुक्क हाँसेर) तपाईंले यो निकै महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । चिनियाँ क्रान्ति र नेपाली क्रान्ति विल्कुल भिन्न समय, विश्व परिवेशमा भएका क्रान्ति हुन् । सामन्तवादको उच्छेद गर्ने र जनताको सत्ता कायम गर्ने विषयमा केही समानता रहे पनि सत्ता प्राप्ति र सञ्चालन दुवैमा धेरै भिन्नता छन् ।
यसमा चिनिया समाज र नेपाली समाजमा रहेका सांस्कृतिक र चेतनमजन्य भिन्नतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नेपालका प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी जनताबाट निर्वाचित भएर सत्तामा पुग्नु, सत्ता कब्जा गर्ने ध्येयका साथ जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने कमरेड प्रचण्ड पनि संसदीय निर्वाचनबाट मात्र सत्तामा पुग्न सक्नु नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुपम विशेषता हुन् ।
राजनीति, नेता र सत्ताबारे नेपाली जनताको र चिनियाँ जनताको बुझाई पनि आनका तान फरक छ । तपाईले नेहरु लिखित ईतिहास पढ्नु भएकै होला । चीनको बारे उनले गरेको टिप्पणी यहाँ स्मरणीय छ , उनी भन्थे –चीनमा धेरै शासकले ५०० बर्ष शासन गरेका थिए । वर्तमान कम्युनिष्ट सत्ता पनि चीनमा ५०० बर्ष टिक्न सक्छ । (हाँसेर) तर नेपाली जनतालाई चाँडो चाँडो सत्ता वा सरकार फेर्ने बानी नै परिसक्यो । दुईतिहाई जनमत पाएको विपी सरकार दुई बर्ष पनि टिकेन । अहिलेको के पी सरकार चाहिँ टिक्छ कि !
प्रश्न : कमरेड तपाईको विचारमा नेपालले समाजवादी राज्य व्यवस्थामा पुग्न अब के–के गर्नु पर्छ ?
माओ : समाजवादमा पुग्न प्रसस्त राष्ट्रिय उत्पादन र स्थीर सरकार चाहिएला, देशमा विद्यमान गरिबी, बेरोजगारीको अन्त्य हुनुपर्ला, शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण हुनु पर्यो, यही हो ।
प्रश्न : शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको कुरा गर्नुभो, एकता भएपछि त नेकपा शक्तिशाली नै छ नि !
माओ : कुरा त्यति सजिलो छैन । हो, प्राविधिक एकता भागबण्डाको आधारमा टुङ्गिदैछ । भागबण्डामा नेपाली कमरेडहरु माहिर देखिए । बाम गठबन्धनमै छँदा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले राम्रै सत्ता साझेदारी गरे । एउटाले राष्ट्रपति लियो, एउटाले उपराष्ट्रपति, एउटाले प्रधानमन्त्री, एउटाले सभामुख । मैले पाइनँ भन्ने ठाउँ त कतै राखेका छैनन् ।
तर, पार्टी एकता दिगो बनाउन त वैचारिक र भावनात्मक एकताको जग मजबुत पारिनु पर्छ । विचारको मामिलामा अब नेतृत्वले विशेष ध्यान दिनु पर्छ । यो पक्षमा धेरै काम भएको देख्दिन । भागबण्डा र आलोपालो मै रुमलिएर पार्टी कमजोर हुन सक्नेतर्फ सबै सचेत होलान् नै ।
प्रश्न : आलोपालोको प्रसङ्ग त अब सेलाएन र ?
माओ : यो विषय बढी कोट्याएर मलाई अप्ठ्यारोमा नपार्नुस् । जेभए पनि केपी र प्रचण्ड आफ्नो जवानीमा सबभन्दा बढी मेरो नाम उच्चारण गर्ने नेतामा पर्छन् । त्यसकारण मलाई कसैको पक्ष वा विपक्षमा बोल्नु छैन । यो विषयमा मेरा केवल दुई कुरा छन् । पहिलो, पद प्रतिको अति मोह र तानातान क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट संकृति होइन । दोश्रो, पार्टी एकता भई सकेपछि यो विषय पार्टी निर्णयको विषय हो, दुई नेताको मात्र विषय होइन । यो पार्टी निर्णयको विषय हो भन्नेमा त केपी कमरेड र प्रचण्ड कमरेड दुबै सहमत छन् अहिले ……………
(माओ बोल्दै थिए । बाहिर कुकुर भुकेको आवाजले पटक्कै उनको आवाज सुनिएन । आफू बसेको काठको कुर्सी कसैले पछाडिबाट तानेजस्तो लाग्यो । म लडेँ । आखिर यो त सपना पो रहेछ । ऐँठन भएर आफू सुतेको खाटबाट लडेछु म । उठेर पसिना पुछ्दै एताउति हेरेँ । झ्यालबाट घाम छिरिसकेको रहेछ । मेरो स्टडी टेवलमा मदन भण्डारीको सङ्कलित रचना, प्रचण्ड लिखित एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद, माओ लिखित नौलो जनवादबारे लगायतका किताब छरपष्ट थिए । र, टेवलमाथि माओको तस्विर )
चीनले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको विरोधमा चीनविरुद्व पनि शुरु भयो प्रदर्शन